Warshadda indhoolayaasha ee Akhriska | Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Shiinaha ee loo yaqaan 'Readymade'
Indhoolayaasha Naafada: Indhoolayaasha Dharka Naafada ah waxay noqdeen kuwa ugu caansan adduunka hadda daaqadaha qurxinta. Ka faa'iidayso hawlgallada fudud, qaab fudud, xulashada dharka aan dhammaadka lahayn. Dadku waxay doortaan Roller indhooleyaal aad u badan oo loogu talagalay qurxinta. Indhooleha curyaamiinta Readymade waxay bixiyaan taxane dhammaystiran oo ka kooban qaybaha iyo dharka, macaamiisha way furi kartaa oo waxay ku dhejin kartaa DIY. Way fududahay in la rakibo oo fududaato in la beddelo. Indhooleyaasha indhooleyaasha: Indhooleyaasha indhaha waa kuwa laqaban karo, oo la taaban karo oo furfuran oo daaqad indho la’aan ah ...
Waxaan soo saarnaa indhooleyaal indhoolayaal kala duwan. Nooca: ● Qoryaha Venetians Indhoole, Bamboo Kuwa Indhoolayaasha ah ● PVC Faux Wood Venetian Blinds umin Indhaha Alloomiya Kuwa Indhoolayaasha ah Waxaa jira noocyo kala duwan oo nidaamyo ah oo ku habboon indhoolayaasha indho-indheeyayaasha loo adeegsado: System Nidaamka xargaha System Nidaamka silsiladda System Nidaamka Mobiilka Indhoolayaasha Venetian, oo mararka qaarkood loo yaqaanno indhoolayaasha indhoolayaasha. ama indhooleyaasha safka ah, waxay door weyn ka qaataan daahyada waxayna abuuri karaan muuqaal casri ah oo casri ah gudaha gurigaaga. Waxaan haynaa noocyo cajiib ah oo indhoolayaal ah oo alwaax ah, hilib aluminiin ...
Indhooleyaasha Wareegga ah waa daaqadda ugu caansan ee soosaarka alaabada. Waxay la shaqaysaa shaandhaynta iftiinka iyo hagaajinta. Iyada oo ku saleysan noocyo kala duwan oo ah naqshadaha dharka, Vertical Blind ayaa ah xulashada ugu ballaaran oo fudeed u dhigma baahidaada. Qalabka: 100% Ballaarinta Polyester: 89/100 / 127mm Nidaamka Vane: Chain / Wand Nidaamka Wejiga Mashiinka: Plain, Jacquard, Blackout, FR .. Aluminium: ciriiri, Barxad, Sarre, Waddo Yar Yar Indhooleheena tooska ah ayaa dhammeeya qol. Waxay gacan ka geystaan ​​ilaalinta asturnaanta, nidaaminta heerkulka, iyo joojinta b ...
Zebra indhoole waxay siisaa asturnaan waxayna ku daraysaa moodal meel kasta. Noqo mid aad u badan oo ka mid ah warshadaha qorraxda-qorraxda tan iyo markii ay ku dartay moodel fudud oo qurux badan daaqadda, oo ay fududahay in la hawl galo, oo si fudud loo tirtiro Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. ETEX waxay soo saartaa wax kabadan 100 naqshadayn oo ah dhar cusub iyo agab moodooyin sare leh. Halabuurka: 100% polyester ama PVC Qorraxda Maqaarada ● Daaha: Astaamaha Acid ● ...
Indhooleyaasha Roman ayaa dhiirigeliyay dhar jilicsan oo dharka ah taas oo ku dartay dareen jilicsan oo diiran oo ah dharka dharka ee qolalka. Nidaamka: Nidaamka Xakamaynta Korantada / Wand ● Qaabka: Balaadhka, Jacquard, Flocking, Blackout, Translucent, Sheer, Dhar-caddeynta dharka ● Farshaxanka: Nooca tolida ee nooca goynta device Aaladda nabdoon ee indha la 'nooc kasta oo indhoolayaal casri casri ah ayaa daaqadahaaga u labista dhadhan macaan leh. . Haddii aad doorbideyso qaab dhaqameed jikada, ama ubaxyo qaloocsan oo roman ah oo loogu talagalay qolka jiifka, Ku habboon xaddidaadda qorraxda ...
Erayo-fure A, Erayo-fureyaasha B,